Health - च्यानल लण्डन
Everest Gautam0Comments	 April 17, 2021
गैर आवासीय नेपाली संघ यूके इंग्ल्याण्ड राज्य समन्वय परिषदको आयोजना तथा NRNA UK, Woolwich Arsenal Riders Club (WARC), Help Nepal Network तथा Nepali Youth Association UK को सहयोग तथा सहकार्यमा नेपालमा हेल्प नेपाल नेटवर्कद्वारा संचालित अनाथ बाल-बालिकाको सहयोग केन्द्र र बुद्ध फाउण्डेसन यूके द्वारा नेपालमा निर्माणाधीन बुद्ध-बृद्धाश्रमको सहयोगार्थ, लन्डनको Woolwich बाट Brighton सम्म ( ११० किलोमिटर भन्दा बढी )
करिब २५ जना सहभागी Cycle Ride for Charity को समुद्घाटन गैर-आवासीय नेपाली संघ यूके कि अध्यक्ष श्रीमती पुनम गुरुङ्गबाट भएको छ ।
कार्यक्रममा एनआरएनए इंग्ल्याण्ड राज्य परिषद् तथा बुद्ध फाउन्डेसन यूके अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, क्याट यूके अध्यक्ष जीवन सेन, ह्यारी गुरुङ्ग, प्रसुना कँडेल, मञ्जु भण्डारी, मनिस श्रेष्ठ, सचिन श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा फस्ट एड प्रसुना कँडेल तथा राजन खकुरालले उपलब्ध गराउने भएका छन भने खाना तथा ड्रिंक्सको व्यवस्था जीत रानाभाट तथा दीपक श्रेष्ठबाट गरिने जनाइएको छ ।
ह्यारी गुरुङ्ग तथा प्रसुना कँडेलबाट प्राप्त: फोटो फिचर-
कपाल किन छिटो झर्छ र यस्तो हुन नदिन के गर्ने: डा. कल्याण सुवेदीद्वारा तयार गरिएको: भिडियो
डा. कल्याण सुवेदीद्वारा तयार गरिएको जानकारी मुलक भिडियो: कपाल किन छिटो झर्छ र यस्तो हुन नदिन के गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी भिडियो निक्कै उपलब्धि मुलक हुने विश्वास गरिएको छ ।
डा कल्याण सुवेदीद्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी अर्थात शरीरका विभिन्न अङ्ग संग सम्बन्धित सयौं जानकारी मुलक भिडियो प्रकाशीत हुदै आएका छन् । यस्ता किसिमका स्वास्थ्य सम्बन्धी भीडियोबाट रोगका लक्षणहरू तथा उपचारका लागि अपनाउनु पर्ने वा सतर्कता लागि थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
Everest Gautam0Comments	 March 6, 2021
लण्डनमा लक्डाउन उल्लंघन गरी पार्टी गरेवापत ६५ हजार पाउण्ड जरीवाना, उमेरको आधारमा कोरोनाको खोप
Everest Gautam0Comments	 March 1, 2021
सेन्ट्रल लन्डनको मेफियरमा कोविडको नियम उल्लंघन गरी राति दुईवटा छुट्टाछुट्टै गैरकानूनी रुपमा पार्टी आयोजना गरेवापत ठूलो रकम जरिवाना गरिएको छ । सुराकीको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा पार्टीमा सहभागीलाई ८०० पाउण्डका दरले तथा आयोजकलाई १०हजार पाउण्ड जरीवाना गर्ने निणर्य गरेको छ । सरकारले जारी गरेको कडा नियमको उल्लंघन गरेको पाइएकाले ६५हजार पाउण्ड ( सालाखाला १करोड रुपैयाँ ) भन्दा बढी जरिवाना गरिने भएकोछ । बेलायत सरकारले चार चरणमा गरी जुन २१ तारिकमा सबै खाले लक्डाउन खोल्ने योजना रहेकोछ ।
Mayfair, Central London ( Picture:-Google )
बेलायतमा हालैका दिनमा कोरोना भाईरसको प्रभाव कम हुँदै गएकोछ भने सरकारले खोप तीब्र रुपमा दिन सुरु गरेकोछ। बेलायती स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यानकक का अनुसार अहिले सम्म बेलायतमा २ करोड भन्दा बढी व्यक्तिलाई कोरोना भाईरस विरुद्दको पहिलाे खोप लगाई सकिएको जनाएका छन् । पहिलो चरणमा हेल्थ/केयर वर्कर, उमेर तथा प्रार्थमिकताको आधारमा खाेप लगाइँदै आएकोछ । दोस्रो चरणमा पनि क्रमश ४०-४९, ३०-३९ वर्ष उमेरको आधारमा खोप दिइने भएकोछ ।
प्रतिदिन सरदर ५ लाख ब्यक्तिलाई कोरोना विरुद्दको खोप दिन थालिएको छ । सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसार खोप दिने कार्य पूरा गर्दै आएकोछ।
बेलायतमा”भ्याक्सिन पासपोर्ट एप”प्रयोगमा ल्याउने, मे१७ तारिक सम्म विदेश घुम्नजान अनुमति नदिईने
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आफ्ना नागरिकलाई अत्ति आवस्यक वा जरुरी वाहेक अन्य अबस्थामा मे महीनाको १७ तारिक सम्म विदेश भ्रमण वा विदेशमा विदा मनाउन जान अनुमति नदिईने जनाएका छन । घरेलु भ्रमणमा अप्रिल १२ सम्म प्रतिबन्ध कायमै रहनेछ ।
[डिजीटल हेल्थ भ्याक्सिन पासपोर्ट]
बेलायत सरकारले हप्ता भित्र “भ्याक्सिन पासपोर्ट एप” प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । जस्मा होल्डरले दुबै पटक कोरोना बिरुद्धको खोप प्राप्त गरेको देखाउनेछ ।
सम्बन्धित व्यक्तिले खोप लगाए पछि “डिजिटल भ्याक्सिन पासपोर्ट एप” मा डाउनलोड गरिएको तस्वीर/फोटोलाई व्यक्तिको परिचयको आधार मानिने छ ।
उक्त व्यक्तिले Covid19 बिरुद्धको खोप लगाएको तथा कोरोना सम्बन्धि रिपोर्ट समावेस गरिएको हुनेछ । भ्याक्सिन पासपोर्टमा उक्त व्यक्तिको बारेमा अन्य जानकारी समावेस गरिने छैन ।
विभिन्न हवाई सेवा तथा देशहरुले मान्यता दिन सुरु गरेको यस प्रकारको पासपोर्टले विदेश भ्रमण वा विदेशमा छुट्टीमा जानको लागि सहज बनाउने विश्वास गरिएकोछ ।
बेलायतमा अहिले सम्म १ करोड ८० लाख भन्दा बढी ब्यक्तिले कोरोना भाईरस विरुद्दको खोप लगाई सकेका छन्।
बेलायतमा चार चरण गरी जुन २१ बाट सबै खाले लक्डाउन हटाउने योजना रहेकोछ ।
३३ देशबाट बेलायत प्रवेश गरे १० दिन क्वारेन्टाइन, ढाँटेमा ५ देखि १० हजार पाउण्ड सम्म जरिवाना
Everest Gautam0Comments	 February 12, 2021
बेलायतले ‘रेड-लिस्ट” मा राखेको वा कोरोनाले बढी प्रभावित भएका विश्वका ३३ देशबाट सोमबार अर्थात फेब्रुअरी १५ तारिखबाट बेलायत प्रवेश गर्ने नागरिकले १० दिनको लागि होटलमा क्वारेन्टाइन बस्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
बेलायत सरकारबाट स्वीकृत गरेको स्थानमा रहन दश दिनको लागि १७५० पाउण्ड अर्थात् करिब २लाख ७० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त नियमको उल्लंघन गरेमा १० वर्ष सम्म जेल बस्नु पर्ने छ । गलत जानकारी दिएमा वा ढाँटेमा ५ देखि १० हजार पाउण्ड सम्म जरिवाना हुन सक्ने कडा नियम लागु गरिने भएको छ ।
बेलायत सरकारले फेब्रुवरी १५ सम्ममा १ करोड ५०लाख जनालाई कोरोना बिरुद्दको खोप दिने लक्ष्य रहेको छ । गत महिनाको तुलनामा कोरोना महामारी तथा मृत्यु दर घटेकाले अहिले कायम रहेको कडा लक्डाउन अर्को हप्ताबाट पुनरावलोकनको तालिका बनाउने संकेत देखिएको छ । पहिलो चरणमा अहिले बन्द रहेको स्कूलहरु सञ्चालनमा ल्याउन प्रयास गरिनेछ ।
कोरोना महामारीका कारण वेलायतको अर्थतन्त्र नराम्रो संग प्रभावित भएको छ भने बेरोजगारी बढदै गएको छ । लक्डाउनका कारण अत्ति आवश्यक बाहेक सबै व्यवसायहरु बन्द रहेकाछन। बिशेष गरी होटल व्यवसाय तथा पर्यटन क्षेत्रमा अझै बढी प्रभावित भएको देखिन्छ ।
निम्न उल्लेखित विभिन्न मुलुकबाट बेलायत प्रवेश गरे अनिवार्य रुपमा १० दिन क्वारेन्टाइन बस्नु पर्नेछ । नबसे जरीवाना तथा जेल संजाय गरिने भएकोले नियम र कानुनको पालना गर्न सवैमा अनुरोध गरिएकोछ।
मनिषा कोइरालालाई कस्तो प्रकारको क्यान्सर भएको थियो ! डाक्टर कल्याण सुबेदी
Everest Gautam0Comments	 February 7, 2021
स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध जानकारी राख्ने क्रममा, डाक्टर कल्याण सुबेदीद्वारा तयार गरिएको मनिषा कोइरालालाई कस्तो प्रकारको क्यान्सर भएको थियो ! क्यान्सरको विषयमा उपलब्ध जानकारी…
Everest Gautam0Comments	 February 3, 2021